हामीले आफूभन्दा सम्मानित मानिसलाई नमस्कार गर्दछौ । सामान्यतया नमस्कार सम्मानको सूचक हो । हिन्दू धर्म अनुसार नमस्कारको महत्व व्यापक छ । भगवानलाई पूजा गर्दा समेत नमस्कार अनिवार्य रुपमा गरिन्छ । यसकारण नमस्कारले केही न केही अर्थ राख्दछ । विस्तृतमा
स्वस्थ जीवन कसरी जिउने ?
यस्ता छन् मेथी खानुका फाइदा !
मेथीको दानामा पाइने विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो कामेच्छाको वृद्धि गराउँदछ । त्यस्तै महिलाहरूमा हुने रजस्वलाको समस्यालाई पनि कम गर्दछ ।
यस्तो छ रिसाहा मानिस छिट्टै मर्नुको कारण ?
एजेन्सी । आलु स्वास्थ्यको लागी निकै लाभदायक छ । तर आलु खाँदा हामीले कस्ता खालका आलु खाइरहेका छौँ भन्ने कुरा जान्नु निकै जरुरी छ । कतिपय आलु हाम्रो स्वास्थ्यको लागी बिष सम्मान हुने गर्छन् । हामी मध्ये धेरैलाई कस्ता खालका आलुले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुने गर्दैन ।
एजेन्सी । थाइराइड एक प्रकारको हर्मोन हो । हाम्रो थाइराइड ग्रन्थीले शरिरबाट आयोडिन लिएर यसलाई बनाउँछ । यो हार्मोन हाम्रो मेटाबोलिजमलाई कायम राखिराख्नका लागि आवश्यक हुन्छ । जब यो ग्रन्थीले कुनै कारणवश धेरै हर्मोन बनाउन थाल्छ, त्यतिबेला थाइराइड बढ्ने गर्दछ ।
पुरुषले खाली पेटमा लसुन खानुपर्ने ७ कारण
मोटोपनबाट यसरी बच्नुस्
एजेन्सी । मोटोपनले पछिल्लो समय धेरै मानिसलाई सताएको छ । मानिसमा मोटोपन बढ्ने धेरै कारण छन् । तर, मोटोपन समग्र स्वास्थ्यका लागि भने फाइदाजनक छैन ।
पैसा फसेको छ वा कसैले दुःख दिइरहेको छ भने अपनाउनुहोस् यो उपाय
एजेन्सी । यदी कसैले तपाईको पैसा फिर्ता गरिरहेको छैन या बिनाकारण तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ भने अथवा कुनै मानिसबाट तपाईलाई समस्या भैरहेको छ भने तपाईले नरिवलको यो सजिलो तरिका अपनाएमा दुश्मनबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
काठमाडौं । अधिकांशको दैनिकी अहिले घर र कोठाभित्रै सीमित भएको छ । यो नेपालमा मात्र होइन, लकडाउन गरिएका भारतसहित विश्वका धेरै देशमा पनि छ।
दुब्लाउन चाहनुहन्छ ? यी खानेकुरामा दही मिसाएर खानुहोस्
आजबाट नयाँ वर्ष २०७७ सुरु, यस्तो रहेको छ तपाईको वर्षभरिको भाग्यफल
एजेन्सी । आजबाट नयाँ वर्ष अर्थात वि.सं. २०७७ साल लागेको छ । यो वर्ष बुध राजा रहेका छन् भने चन्द्र मन्त्री रहेका छन् । यस वर्षमा विभिन्न राशिहरुको विभिन्न ग्रहफल रहेका छन् ।